ခိုင်မာသော ပြောင်းလဲခြင်းတွင်လိုအပ်ချက်သည်မှာ မှန်ကန်ဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ စစ်မှန်သော အုပ်စု။ သင်၏အသက်တာတွင်၊ သင်ကိုချစ်ခင်၍အမှန်ပြောသောသူ လိုအပ်သည်။ သင်၏အသက်တာတွင် အခြားကူ ညီမစမည့်သူမရှိသဖြင့်လုပ်မရသည်အမှုများရှိမည်။
သင်သည် အခြားသူများ လိုအပ်ပေမည်။ သင်သည် သူတို့အကြောင်းကိုဘယ်သူနဲ့မှမပြောဘူးရင်၊ စိတ်ကသိက အောက်ဖြစ်မည်။ မေးခွန်း--ထိုမဟာဗျူဟာက သင့်အတွက် ဘယ်လောက် ကောင်းစွာဆောင်ရွက်ပေးသလဲ? သင်၏အသက်တာကို သင်ကိုယ်တိုင်ပြောင်းနိုင်လျှင်၊ သင်ပြောင်းပြီးပြီပေါ့၊ ဒါပေမဲ့ပြောင်း၍မရပါ။
ကိုယ်ဘာသာညာနေခြင်းရပ်ကိုသင့်ပြီ၊ သင်ပြောင်းလဲလိုလျှင်၊ အခြားသူကူညီမှုကိုလိုအပ်ပေမည်။ သင်သည် သတ္တိရှိသောအဆင့်၊ စစ်မှန်သောအုပ်စုဖြစ်ရမည်၊ အဖွဲ့ငယ်များသည်အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ထိုကြောင့် သင်သည် အဖွဲ့ငယ်တစ်ခုတွင်ရှိသင့်သည်။ သင်သည်အဖွဲ့ငယ်တစ်ခုထက်ပို၍လိုအပ်ပေမည်။ သင်သည်လူတစ်ယောက်ထိုအဖွဲ့တွင်လိုအပ်ပါသည်၊ သင်လုံးဝ ပွင့်လင်းမှုနှင့်ဖြောင့်မတ်သူလိုအပ်သည်။ သင်သည်လူတိုင်းကိုဖွင့်ပြရန်မဟုတ်ပါ--တစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုတော့သိသင့်သည်။
ဘုရားသခင်က ကြေးနန်းရိုက်သည် ကျွန်တော်တို့တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် လိုအပ်ကြသည်၊ ဤအရာ၏ အဓိပ္ပါယ်သည် ကျွန်တော်တို့သည် အကျင့်ဆိုးများကိုမဖယ်ထုတ်နိုင်ဘဲ ဆက်လက်တွယ်ကပ်လျက်ရှိပါသည်။ သင်တစ်ယောက်ထဲလုပ်၍မရပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၊ ဘုရားသခင်က သင်သည်အခြားသူများကိုလိုအပ် ရန်လုပ်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ကျမ်းစာက၊ “ထိုကြောင့် မုသာစကားကိုပယ်ရှား၍၊ မှန်သောစကားကိုသာ အချင်းချင်းတယောက်နှင့် တယောက် ပြောကြလော့။ အကြောင်းမူကား၊ ငါတို့သည် အချင်းချင်းအင်္ဂါချင်းဖြစ်ကြ၏။” (ဧ ၄း၂၅) သင်သည် ယုံကြည်သူတစ်ယောက်ဖြစ်လျင် သခင်ယေရှုခရစ်၏ကိုယ်ခန္ဓာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်သည် အခြားယုံကြည်သူများနှင့်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည်။ သင်၏ခရစ်ယာန်အသက်တာတွင် တစ်ဦးထဲနေရန်မဟုတ်ပါ။ သင် ဤအရာကိုမလုပ်နိုင်ပါ။
သင်၏အသက်တာတွင် နက်ရှိုင်းသော၊ မှောင်မိုက်သော အပြစ်အနာအဆာများကို အလေးအနက်ထား၍ ပြောင်းလဲလိုပါက၊ သင်သည် အမှန်အတိုင်းဖြစ်သော တည်ရှိခြင်းကို ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲ ချိုးနှိမ်နိုင်ရမည်။ ကျွန်တော်တို့သည် အလွန်ကြီးမားသော အတိုင်းအတာရှိသည် အားထုတ်မှုကို အပြစ်များကို ကာကွယ်ရန် ဖြုန်းတီးသည်။ ကျွန်တော်တို့၏ အနာတရဖြစ်မှု၊ စိတ်ကျဉ်းကျပ်မှု၊ နှင့် အပြစ်အနာအဆာများ။ သင်သည်အမှန်အတိုင်းဖြစ်သော တည်ရှိခြင်းအတွက်အချိန်များစွာသုံးသည်။ အသက်တာတွင်မမှန်သော အရာအတွက်အကာအကွယ်ပေးခြင်း။ သင်၏အသက်တာတွင်မှန်ကန်သောအရာများအတွက်သုံးရန်စွမ်းအင် များရှိပါသေးသည်။
ကျွန်တော်တို့ သန့်ရှင်းခြင်း အတွက် ကြီးမားသောတန်းကို ကောင်းမွန်စွာတွေ့ရန် ဆန္ဒရှိသည်။ ထိုတန်းကို ကြော်ပြီး ဒါနဲ့ ကျွန်တော်တို့ လွတ်လပ်ပြီ၊ ကြီးသောလမ်းပိတ်ဆို့မှုသည် ကျွန်တော်တို့နှင့်ဘုရားသခင် ကျွန်တော် တို့ကိုရှိစေခြင်သည့်နေရာကြားပိတ်ဆို့မှုမရှိတော့ပါ လွတ်လပ်မှုရပြီ။
သင်၏အသက်တာတွင် ပြောင်းလဲမှုပြုလုပ်ခြင်ပါသလား? သင်နှင့်တစ်ဦးတစ်ယောက်ကြားမှာ သင်၏ မအောင်မြင်ခြင်း ကိုပွင့်လင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းရှိပါစေ။
Monday July 25, 2011 12:00 AM Posted by Rick Warren